Longest Journey ngu Electric Skateboard - Jomo Technology Co., Ltd
It ukuya ukuze afinyelele eqophelweni lapho kuthatha emisha engathí sina ugqame ngaphakathi kagesi skateboard endaweni; ongakhetha efana okuzivuselela unyathela amabhuleki kanye-wheel izinjini. Wireless ukulawula ezikude wawungase ubhekwe kancane ezingeni ababuthakathaka uma lenziwa plastic esilula futhi kuyangijabulisa angabacwasi ezishibhile. Ngokuvamile, ogibele i skateboard electric ukukhokhisa i ebhodini futhi kungcono ukuqala ezisebenza emgwaqeni omkhulu kanye nokuphathwa akude ngokumenza ukulawula kanye nokulawula ijubane. Ukubambezela kini bacindezela inhlamvu phambili ku ezikude ephathwayo. Ezimweni ezinjengalezi, into kuphela lokho kufanele aqede kuyinto ukuya isikhundla okungukuthi sigobe phansi okukuvimbela ekutholeni umonakalo ngisho uma kwenzeka uhileleka. Okwenza ugibele ngisho crazier futhi kumnandi esengeziwe is yaniso ukuthi angaya ekukhuphukeni futhi ekwehleni ngaphandle inkinga, ngakho uzokwazi ukuba uhambo nalo noma ikuphi lapho uthanda. Ayanda KV, ngokushesha lo skateboard kagesiizohambisa. Amasondo kule skateboard kagesi zenziwa kusukela iraba angasetshenziswa kunoma iyiphi inhlobo sezwe.
Futhi ezihlukahlukene elikhulayo skateboard kagesi abacabanga ijubane yabo (abanye uzokwenza kahle 20 ngehora phezu), ukushesha okusheshayo, eziningi ogibele izindlela, futhi sturdiness lapho ukubeka ngu igadango zabo ngokugcwele noma bakhishwe-mgwaqo. Ngakho uma umuntu ohluphayo ngubani luhlala kuphela elula ke KOOWHEEL skateboard kagesi uzohlangana izimfuno zakho. Ngakho, begcizelela ukuthi engqondweni, sase ngokuvamile ujabule ukubona lapho Koowheel kagesi isizukulwane skateboard yesibili Kooboard waqinisekisa phezulu laphaya. Eyokuqala skateboard kagesi ukuze lelisu izici eziningi ukuvikeleka for umgibeli.
Empeleni, ukubopha uhlelo okuzivuselela okubiza ibhethri. Sesikhathele skateboard kagesibokuhlela. Ukuze amashumi ezigidi abahamba ngezinyawo, a skateboard kuyinto mnandi futhi kukho okunengqondo ukuba unqamule amabanga eside ngokushesha futhi sibagweme ezikhungathekisayo traffic gridlocked noma emikhukhwini eminyene futhi ukungasebenzi zokuhamba zomphakathi. Kodwa, kukhona nokuhle kulesi simo zonke embi ngalo, futhi yilokho kanye kunjalo khona lapha. Ngemva kokuchitha eduze amahora 200 ucwaninga brand ngempumelelo kakhulu futhi onobuhle emakethe, sasithenga phezulu amabhodi 10 emakethe kwesokudla kulo mzuzwana futhi wazihlola isici-by-side ukucinga ukuphuma ngalo e-skateboard imihlahlandlela ngempela zonke! Uma ufuna ukuthola omunye okuhle, China indawo bheka. Nakuba izinhlelo ekhona ukuze unciphise ekhuphuka eziyingozi ingakwesokunene, umgibeli kufanele baqonde ikhono leli bhodi anganikeza kumele sihlonishwe ukusetshenziswa evikelwe. Nokho, kungcono ngaso sonke isikhathi kuyisu elihle kakhulu ukuqinisekisa imihlahlandlela bomdabu neziqondiso mayelana ugibele ibhodi yakho uma uhambo nalo bese uvumele amaningi isikhathi esengeziwe ukuze uthole ukuvikeleka uma nithanda uhambo kanye yakho E-skateboard. Kuthatha imizuzu engamashumi amane nanhlanu kuphela abiza ibhodi nge ishaja okusheshayo.